Samy manana ny tatitra ataony ny fampitam-baovao Frantsay sy Anglisy mikasika ny fihetsiketsehana ao Alzeria. · Global Voices teny Malagasy
Tsy dia ifantohana araka ny tokony ho izy ve i Alzeria ao amin'ny fampitam-baovao teny anglisy?
Voadika ny 18 Avrily 2019 5:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Shqip, українська, Ελληνικά, čeština , Italiano, Français
Ahafahana manisa, manombatombana, ary manatsara ny fitantarana ataon'ny fanaovan-gazety momba ny hetsi-panoherana arakaraka ny toerana ara-jeografika na ny fiparitahan'ny fiteny manerantany ny Media Cloud. Manamafy ny fahasamihafana eo amin'ny fitantarana momba an'i Alzeria ny Media cloud.
Kamel Daoud, mpamakafaka ao amin'ny Point sy Le Quotidien d'Oran, na ny Oran Daily, nanoratra fa tsy maintsy manafaka ny tenany amin'ny fitsarana an-tendrony ataon'ny fampitam-baovao vahiny i Alzeria.
Tao amin'ny New York Times, naneho hevitra momba ny famihinan'ny vondrona mitokamonina amin'ny fahefana ao Alzeria i Adam Nossiter, nanonona mpanao fihetsiketsehana izay namaritra ny governemanta ho “toy ny fokom-pianakaviana.” Ao amin'ny Al Jazeera, Youcef Bouandel indray mametraka an'i Alzeria amin'ny toe-javatra tamin'ny Lohataona Arabo tamin'ny taona 2010. Ho an'ny BBC, Ahmed Rouaba nisafidy hifantoka momba ny fiantraikan'ny tambajotra sosialy.
Tao amin'ny New Obs, nanoratra momba ny fahanginana hafahafa teo amin'ny governemanta frantsay nandritra ny korontana i Pierre Haski. Ho an'ny France 24, nandinika ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina i Marc Daou: ao Tonizia, mihevitra ny governemanta fa “manan-jo haneho ny heviny ny vahoaka Alzeriana“, raha tany Maraoka kosa, araka ny nolazain'i Daou, “marobe ireo Maraokana nandray tamim-pifaliana izay heverin'izy ireo fa fialàn'ny filoha Alzeriana manoloana ny tanoran'ny firenena. “